July 1, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Finfinneen “Dantaa Addaa” Osoo Hintaane Qaama Dachii Dhaloota Oromiyaati
TPLF mata-duree ‘’Bu’aa Addaa Ummatni Oromoo Finfinnee irraa argachuu qabu”jedhuun torban kana wiixinee tokko labsuun isaa ni yaadatame. Wiixineen kun karaa haqaa dantaa sabni Oromoo Finfinnee irraa argachuu qabu heeruuf kan yaadamee osoo hintaane, ijibaata TPLF bara angoo bittaa isaa dheereffachuuf saganteeffate ta’uu isaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo jala harriqee hubachiisuu fedha.
Finfinneen qaama dhaloota Oromiyaati. Oromiyaa irratti abbaan Ummata Oromooti. Ummatni Oromoo bulchiinsa biyya isaaf eyyama ilmaan TPLF argachuu isa hinfeesisu. Finfinneen Maqalee ykn ammoo Aduwaa miti. Finfinneen wiirtuu Oromyaa, jiddu-galeessa buufata Ilmaan Oromooti. Finfinneen dachee akaakilee fi abaabileen keenya baroota dhufaa darbaaf irratti wal horaa jiraataan, qee uuman nu badhaaase malee daangaa ijoolleen Tigiraayi waraqaadhaan sarartee nuuf qooddu miti. TPLF dhimma Oromoo fi daangaa Oromiyaa irrati murtee tokkoyyu kennuuf angoo itti hinqabdu. Nuti Qeerroon Bilisummaa Oromoo biyya abbootiin keenya dhawaataan nutti dabarsan eegachuuf, kunuunsuu fi taliiguuf mirga fi dirqama guutuu itti qabna.
Bulchiinsa Finfinee ilaalchisee wiixineen TPLF ololaa jiru kun itti –fufiinsa sagantaa isaa biyya Oromoo qoqqoodee bara angoo isaa dheereffachuuf abbalaa jiru sana mirkaneessa. TPLF daangaa Oromiyaa cicciree ummata Oromoo sab-guddeessa irraa gara sub-xiqqeessaatti jijjiiruuf saganataa siyaasaa ifaa fi dhokataa ta’ee geggeessaa as ga’uun isaa dhugaa dirree irraa calaqqisu. Daangaalee Oromiyaa golee maraan dhiibaa fi dhiibsisaa ture, ittis jiru. Ummatoota Sabni keenya biyyaa isaa fi ollaa keessatti nagaan waliin jiraataa ture dantaa siyaasaa mataa ishaaf jecha walitti buusaa, lubbuu fi qabeenya hedduu barbadeesaaa fi barbadeessisaa as gesse. Shiroota Wayaaneen TPLF raawaataa ture fi jiru kana irratti ummatni Oromoo guutuu guutuutti waan dammaqeef “Finfinnee” akka toftaa siyaasaa haarawaatti imaammatee abju’achaa jirti. Abjuun isaa kunis tasa hojiitti hiikamu hindanda’u. Finfinneen yoom iyyuu qaama Oromiyaati! Mootonni TPLF Finfinnee bal’isuus ta’e dhiphisuus hindanda’an.
Wiixineen Wayyaaneen baafate kun mirga abba-biyyummaa Ummatni Oromoo Finfinee irratti qabu kan sharafuu qofa osoo hintaane jiruu fi jireenya ummata keenya naannoo Finfinnee jiraatuu irratti balaa guddaa kan akeekudha. TPLF maqaa wiixinee kanaan “Master plan” ummatni keenya dhiiga ilmaan isaatiin wagga lama dura tarsaasee gate sanatti deebifte lubbuu horuuf wixxifachaa jiraachuu isaa mirkaneessa. Akkuma armaan dura godhaa turte maqaa invesitimeentii fi guddina magaalaan ummata keenya lafa isaa irraa buqqiftee miseensota fi abbootii waraanaa isaa irra qubachiisuuf muddamaa jiru. Saba keenya lafa-dhabeessaa fi jiru-dhabeessa godhee ergachaa jiraachuf imaammataa jiru. Oromoo deegsuun ofii duuromuu, nu salphiftee ofii kabajaan jiraachuu karoora qaban keessatti isa dhokataa dha. Wiixineen isaaniie kun kan har’aa qofa osoo hintaane, imaammata TPLF bara-baraan biyyatti keessatti ‘duroomsaanii fi mootomsanii” jiraachisuu, kan isaan bara dheeraa dura herratan sana calaqqisa. Qeerroon Bilisummaa Oromoo shira kana irratti erga dammaqee bubbuleera. Wareegama Bilisummaan saba isaa irraa barbaadduf lubbuu isaa gumaachaa tureera, gara fuul-duraattis gumaachiuf qophiidha.
Balaa ummata keenya irratti TPLF wiixinatte kana dandamannee, tokkummaa saba keenyaa fi daangaa biyya keenya kabachiisuun darqama lammmmaa nuti ilmaan Oromoo waloodhaan qabnudha. Diina mirga nuti umamaa fi seeraan qabnu nu sarbe kana injifannee biyya sabni keenya angoo siyaasaa guutuu itti qabu ijaarrachuuf gamtaan sosso’uun dirqama.
Yaa Uummata Oromoo! Wiixineen TPLF sobee itti fakkeessaaf baafte kun abba-biyyummaa ati uumamaan Finfinne irratti qabdu seeraan si sarbuuf shira xaxamaa jiru ta’uu isaa hubadhu! Finfinneen lafa ati dhafaa-darbaan irra jiraatte, qee’ee akaakayyuu fi abaabayyuu keetiiti. Lafa dhalootaan qabdu kana irratti eenyu iyyuu mirga kee seeraan daangessuu hindanda’u. Kanneen mirga ati uumaamaa fi seeraan qabdu daangessanii, bara-baraan si acuucaa jiraachuf abbalan hunda irratti ilmaan kee Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin hiriiriiti qabsoo roga hundaa geggeessi! Gaaffiin ati Finfinnee irratti qabdu mirga siyaasaa guutummaa biyyaa Kee Oromiyaa irratti gonfachuudhaan qofa deebi’a.
Uummatni Oromoo lafa kee Magaalaa Finfinnee keessatti Afaan, aadaa, duudhaa , eenyummaa fi hawwaasummaa kee guddiffachuun mirga akka “addaatti” of-irroo qee’ee kee dhuunfatee jiruun siif qoodamu osoo hin ta’iin, haqa ati uumamaan qabdudha. Ololli TPLF “mirga addaan Finfinnee irratti” ummata Oromoof murteesse jette lallabaa jirtu kun tuffii isheen akka sabaatti siif qabdu calaqqisa. Tuffii kanatti maayyii gochuuf bakka jirtu maratti Shira Wayyaanee dammaqii of irraa tiksi. Ofi ijaarii Fincila Xumura Gabrummaa ilmaan kee Qeerroon Bilisummaa Oromoo geggeessaa jiru cinaa muratnoodhaan dhaabbadhu! Wareegama fedhe gaafatullee guyyaan ati Bilisummaadhaan biyyaa keessa jiraattu fagoo miti.
Erga angoo siyaasaa biyyatti qabatee TPLF ilmaan Oromoo irratti dalagaa diinummaa raawwataa jira. Kumaatamoota ajjeessitteetti, kumaatamootaanis bakka-buutee dhabsiifteetti. Kanneen baroota dheeraaf mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran lakkoobsa hinqaban. Ammallee gochaalee kanaan si sodaachiftee bara-baraan si saamaa jiraachuuf saganteeffataa jirti. Gochaan ishee kun sodaa osoo hintaane xiiqii sitti horee biyya abbaa keetii dhuunfachuuf tokkummaa kee jabeeffadhuu diina kana of irraa qoladhu! Ilmaan kee jabeessii akka isaan mirga isaanii falmatan dammaqfadhu. Maatii wareegamtootaa fi hidhamtoota keetii humna qabdu hundaan tinnifadhu! Beekaa kee dhaggeeffadhu, walaalaa kees gorfadhu! Hirree tokkichaan diina mirga si sarbaa jiru kanatti fuullefadhu!
Jarmiyaalee Siyaasaa Oromoof: Ummatni isin ‘ni qabsoofnaaf” jechaa jirtan balaa hedduu keessa jiraachuun isaa ifaadha. Yeroo akkaan rakkisaa kana keessatti atattamaan ummaticha balaa kana jalaa baasuuf yoo hincarraqiin seenaan isin gaafachuuf jira. Sochii ummatni keenya of-ittisuuf godhaa jiru itichitanii dhimma waloo irratti tokkummaadhaan akka bobbatan Qeerroon Bilisummaa dhaamsa lamummaa isiniif dabarsa. Qabsoon Ummatni Oromoo mirgaa fi bilisummaa isaa gonfachuuf itti-cichaa jiru, daangaan Oromiyaa, Afaan Oromoo fi dhimmi Finfinnee dhimma waloo dhaabota siyaasaa keenya mara ilaallatudha. Dhimmoota kana irratti waliigaltee fi tokkummaadhaan akka bobbatan Qeerroon Bilisummaa kabajaan isin gaafata. Garaa-gartummaa xixxiqqaadhan xaxamanii yeroo belbeltuu kanatti ummata ofii qaqqabuun hanqachuun badii dhalootni dhufu haa hafu hinjenne dalaguu waliin wal-gita. Kanaafuu, dhaaboleen siyaasaa Oromoo martinuu akka dhuunfaa fi akka walootti ummata keenya baraaruuf saffisaan akka bobbatan Qeerroon Bilisummaa kanajaan isin gaafata.
Waldaalee Hawaasaa fi Dhaabbatoota Sub-Qunnamtii Oromoo hundaaf: Ummatni Oromoo isin malee ambasaadaroota addaa kan hinqabne ta’uu hubattanii, rakkinaa fi gidiraa isa irra gahaa jiru biyyoota keessa qubattan hundaa beeksisuu dalagaa keessan isa angafa akka godhattan Qeerroon kabjaan isin yaadachiisa. Waladaalee Hawaasaa fi dhaabbatoota Sub-qunnamtii Oromoo jaarmolee keessan keessatti nagaan akka jiraatuuf akkasumas harki diinaa lo’aa isin jidduu seenuun Tokkummaa keessan akka hindiigneef yogguu of-eeggannoo jabaa qabaachuun waajiba. Qeerroo Bilisummaa wareegamaaf of qopheessee bobba’aa jirus waan humni keessan danda’e maraan gargaaruu irraa akka of hinqusatne waamicha qabsoo isiniif dabarsina.
Tokkummaadhaan yoo bobbaanee fi numuu bilisummaa saba isaaf wareegama irraa eegamu yoo gumaache saba keenya roorroo jalaa baasnee biyya keenya guutuu guutuutti gonfachuu ni dandeenya!
« SBO: Adoolessa 2 bara 2017. Oduu, Ibsa ABO fi Gaaffii fi Deebii Dargaggoo Mootii Kumalaa Ejjetaa waliin taasifame -Kutaa xumuraa.
RSWO – Adooleessa 2, 2017 – ODUU, DHAAMSA RSWO FI QOPHII BIROO DHAGEEFFADHAA »